I-WordPress 3.3 ifika | Martech Zone
NgoLwesibini, nge-13 kaDisemba ngo-2011 NgoLwesibini, nge-13 kaDisemba ngo-2011 Douglas Karr
WordPress 3.3 ifikile! Ukusebenziseka kokujongana nolawulo luphuculo. Xa i-WordPress ivule imenyu, kwabonakala ngathi wonke umakhi wePlagi ugqibe ukwenza imenyu entsha. Oku kwenza ukuba inkqubo yemenyu kwiWordPress ikhathaze. Imenyu yesitayile semouseover entsha yenza ukuba kube lula kakhulu ukuskrolela kuyo kwaye ufumane oko ukufunayo. Umdibaniso woLawulo ngoku usebenza kakuhle kwiipilisi ngokunjalo.
Inqaku elinye elinomdla longezwe kwifayile ye- API bubuchule boku NONE. Oku kuvula ithuba lokuba abaphuhlisi badibanise amaphepha abo olawulo nabahleli. Umhleli uqobo uphuculwe ukubandakanya ukudonsa kunye nokuyeka ujongano, ukuvumela iifayile ezininzi ukuba ziphoswe ngaphakathi!
Kubonakala ngathi ukukhula kwe Tumblr Ikwajika ezinye iintloko kwiWordPress… umngenisi weTumblr ngoku uhlala ngoku :). I-WordPress ithumele uluhlu lwazo zonke izinto eziphuculweyo I-WordPress 3.3 kwindawo yayo.
I-OpenCart: Umthombo ovulekileyo we-Ecommerce